1000ml ikampu yokuhlunga imicibisholo yamanzi angamacilisi China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:1000ml Amakhemikhali Amanzi Ayisisindo,1L Amabhodlela Amanzi E-Abicile,Hlunga Ama-Water Bottles
Home > Imikhiqizo > Amabhodlela Amanzi weSilicone > Hlunga iziphuzo zamanzi ezingabheki > 1000ml ikampu yokuhlunga imicibisholo yamanzi angamacilisi
Sinezinhlobonhlobo zamabhodlela amanzi angamakhemikhali angu-1000ml ehlongozwayo ekhethiwe, sinama-1000ml no-750ml, bobabili bangasebenzisa umzimba ofanayo we-silicone, nawo wonke amabhodlela ethu wamanzi angamakhemikhali angu-1000ml wekhamera alula kakhulu ukuphuza kwamanzi nokugcwalisa amanzi, njengabo bonke kubo banomlomo omkhulu wokugcoba kwamanzi nomlomo omncane wokuphuza amanzi. zikhanya kakhulu, kuphela isisindo se- 1/5 njengamabhodlela wamanzi we-samilar kwezinye izinto. futhi ube nezinzuzo ezinikezwe ngezansi:
1000ml ikampu yokuhlunga imicibisholo yamanzi angamacilisi yimikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. Ngesisefo setfu amabhodlela amanzi abicah 1000ml amatende Ngokuyinhloko activicity ourdoor. Izinto ezibonakalayo zamabhodlela amanzi samakhemikhali ethu angu- 1000ml ayisihluthulelo samaphesenti angama- 100% we-BPA ebangeni lobuchwepheshe obungenasici kanye ne-PP. I- 1000ml yekhamera yokuhlunga yamabhodlela amanzi angamabhodlela amanzi asuke engeyona into enobuthi, futhi ivunyiwe yi-FDA / SGS / LFGB / CE. Kuyinto enothile, engazinzile. Ngakho ngiyaqiniseka ukuthi i- bpa yethu ikhululekile ibhodlela lamanzi lingcono kakhulu kuwe .Siye senza umkhiqizo we-silicone iminyaka engaphezu kwengu-10, kanye nebhizinisi lamazwe angaphezu kweminyaka engama-4. Sinesipiliyoni seminyaka eyisishiyagalolunye ekukhiqizeni Amabhodlela wamanzi angabheki , Amabhodlela wokuhamba we-silicone , ama- Silicone ahlukahlukene , Izingane ezithinta umgexo , Amakhemikhali ahlaziya amathoyizi , Izingane ezihamba nge-pacifier clips , I- Baby teething mitten , njll. Okokugcina, Siyifektri, ngakho-ke singakunika izimpahla ngentengo yokuncintisana ngekhwalithi ephakeme kanye nezinsizakalo zobuchwepheshe.
1000ml Amakhemikhali Amanzi Ayisisindo 1L Amabhodlela Amanzi E-Abicile Hlunga Ama-Water Bottles I-Amakhemikhali Amanzi Angabonakali Amanzi Amakhemikhali amakhofi wekhofi Amakhemikhali aphuza amanzi aphuza amanzi Ama-Amazon Hot Ukuthengisa Amakhemikhali Amanzi Angabheki Amabhodlela Amanzi Angokwezifiso